लसुन तरकारी हो कि मसला ? यसमा के कस्ता गुण हुन्छन्, अदालतमा मुद्दा दायर ! | Rajmarga
लसुन तरकारी हो कि मसला ? यो विषयमा विवाद सुरु भएको छ । विवाद यसै ख्यालठट्टामा भएको होइन, यसको कारण गम्भीर छ । त्यसैले यो विवाद आदालतसम्म पुगेको छ।
भारतको राजस्थान उच्च अदालतले राज्य सरकारलाई सोधेको छ कि लसुन तरकारी हो कि मसला ? वास्तवमा राजस्थान सरकारको सन् २०१६ को नयाँ कानुन अनुसार लसुनलाई खाद्यान्न मण्डीबाट बेचिनु पर्दछ । तर २०१६ अघिसम्म तरकारी बजारमा बेचिने गर्दथ्यो ।
विक्रेताहरुका अनुसार तरकारी बजारमा बेच्नका लागि बिचौलियाहरुले ६ प्रतिशन कमिसन दिने गर्दछन् । तर खाद्यान्न गोदामा बिचौलियाहरुले मात्र दुई प्रतिशत कमिसन दिने गरेका छन् । यो नै लसुन बेच्नेहरुको समस्या हो ।
के हो पूरा विवाद?
यो विवादको विषयमा जोधपरको आलु–प्याज र लसुन विक्रेता संघले राजस्थान उच्च अदालतमा एउटा जनहित याचिका दायर गरेको छ । याचिकामा प्रश्न गरिएको छ कि आखिर लसुन खाद्यान्न बजारमा किन बेच्ने ?
बीबीसीसँग कुरा गर्दै आलु प्याज र लसुन विक्रेता संघका अध्यक्ष बंसीलाल सांखलाले भने–विगत ४० वर्षदेखि लसुनलाई हामी तरकारी बजारमा बेच्दै आएका छौ । अहिलेसम्म कुनै समस्या छैन । यो आवश्यक छ कि तरकारी बजार अब सानो भएको छ । तर सरकारले बजार ठुलो बनाउने विषयमा सोच्नु पर्दछ व्यापारीलाई सताउने होइन ।
राजस्थान सरकारका अनुसार तरकारी बजारको स्थान कम भएका कारण सरकारले सन् २०१६ मा कानुन परिवर्तन गरेर लसुनलाई खाद्यान्न बजारमा बेच्ने प्रावधान राखेको थियो । सन् २०१६ सम्म तरकारी बजारमै बेचिने गरेको थियो ।
यो विषयमा बीबीसीले राजस्थान सरकार पक्षको विचार बुझ्ने कोशिस गरे पनि सरकारका कुनै अधिकारी तयार नभएको उल्लेख गरेको छ।
जब विवादले विषयवस्तु उठान गरिहाल्यो हामी पनि लसुनका बारेमा बुझौ, यो रोचक कुरा शायद तपाईलाई पनि थाहा नहुन सक्छ।
अमेरिकी कृषि विभागको शोधअनुसार लसुनको प्रयाग करिब ५ हजार वर्ष पुरानो छ। यो कुराका लागि इतिहासमा प्रमाण छ कि बेबिलोनियाका मानिसहरु ४५ सय वर्ष पहिलादेखि यसको प्रयोग गर्दै आएका थिए ।
संयुक्त राष्ट्रसंघको सन् २००७को रिपोर्टका अनुसार चीनमा लसुनको सबैभन्दा बढी खेती हुन्छ । लसुनको कुल उत्पादनको ६६ प्रतिशत हिस्सा चीनमा लगाउने गरिन्छ ।
लसुन खेतीमा दक्षिण अफ्रिका र भारत दोस्रो र तेस्रो स्थानमा छन् । तपाईलाई यो थाहा पाएर आश्चर्य लाग्ला अमेरिका चौथो स्थानमा छ।
यही रिपोर्टमा १७ सय वर्ष पुरानो भारतीय संस्कृत ग्रन्थको हवाला दिँदै भनिएको छ कि असुरहरुका राजा राहुको टाउको जब विष्णुले काटे तब उसको रगतबाट लसुन पलाएको थियो । यो रिपोर्टमा पनि लसुनलाई एक प्रकारको तरकारी नै मानिएको छ।
भारतीय कृषि अनुसन्धान संस्थानका तरकारीविज्ञ डाक्टर प्रिटम कालियाका अनुसार लसुन मुलतः तरकारी हो, तर यसको प्रयोग मसलाका रुपमा पनि गर्ने गरिन्छ । यसलाई प्रशोधन गरेर मसलाका रुपमा बढी प्रयोग गर्ने गरिन्छ ।
डा. प्रितमका अनुसार लसुन बेच्ने विषयमा कुनै विवाद हुनु जरुरीछैन । सधैंदेखि यसलाई तरकारी बजारमा बेच्ने गरिँदै आएको छ। आद्यान्न बजारमा लसुन बेचिँदैन । सधैदेखि तरकारीका साथ तरकारीकै रुपमा खाने गरिन्छ । चाहे तपाई अचार बनाउनुस् वा फेरि तरकारीमा हाल्नुस । यसको खेती तरकारीकै रुपमा गर्ने गरिन्छ ।
माटोमुनि उम्रने लसुन आमरुपमा अक्टोबर–नोभेम्बर महिनामा खेती गरिन्छ भने अप्रिल महिनामा खन्ने गरिन्छ । लसुन र प्याज प्रजातिको तरकारी हो । यो दुबैलाई बहिनी र भाइ भन्ने गरिन्छ । यसलाई बल्बको श्रेणीमा राख्ने गरिन्छ अर्थात प्याज, लसुन र ट्युलिपको फूल एकै प्रजातिका हुन् ।
यसको गुणको कुरा गर्ने हो भने यसमा कयौ पोषक तत्व हुने गर्दछ । शरीरमा यसको निकै कम मात्रामा आवश्यक हुन्छ, तर शरीरमा ती तत्वको कमी हुँदा गम्भीर रोग लाग्न सक्दछ।
लसुनमा एन्टीबायोटिक, एन्टीभायरल र एन्टीफंगल गुण हुन्छ । वास्तवमा लसुनमा पाइने केमिकल एलिसिन एक प्रकारको शक्तिशाली एन्टीबायोटिक हो । यसमा पेनिसिलिनजस्ता खुबीहरु हुने गर्दछ । मौसम ज्वरो भगाउन लसुन निकै सहयोगसिद्ध हुन्छ ।
लसुनमा सल्फ ठुलो मात्रामा हुन्छ । जब हामी यसलाई चबाउँछौ तब यो सल्फर रगतमा मिल्छ र हामीलाई स्वास लिने नली, फोक्सो र मुखबाट यसको गन्ध आउँछ, ठिक त्यसरी नै जस्तो मदिराको गन्ध आउँछ ।
ब्रस गरेपछि मुखबाट यसको गन्ध हट्छ तर यदि तपाईलाई पसिना आए त्यसमा पनि लसुनको गन्ध आउनेछ । डायटिशियन अर्चना गुप्ताका अनुसार यदि लसुनका साथ अन्य खाना खाए पनि यसको गन्ध कम हुन्छ । जस्तै यदि लसुनका साथ तुलसी, पुदिना, अजवाइन, सलादको पत्ता खानामा मिलाएर खाने हो भने गन्ध कम हुने गर्दछ ।
लसुन एकप्रकारको प्राकृतिक ब्लड थिनर हो, अर्थात यसले रगत पातलो बनाउँछ, जुन मानिसमा कोलेस्ट्रोल वा मुटुका धमनीहरुमा रोकावटको समस्या छ, उनीहरुका लागि लसुन निकै लाभकारी मानिन्छ ।
संसारका कयौ देशमा हेल्थ र फुड स्पलीमेन्टका रुपमा लसुनको प्रयोग हुने गर्दछ । जुन मानिसलाई लसुनको गन्ध मन पर्दैन, उनीहरुका लाग स्मेल फ्री गार्लिक ट्यावलेट पनि पाइने गर्दछ ।
रुघाखोकीजस्ता विरामी हुँदा त्यसलाई ठिक गर्न लसुन उपयोगी मानिन्छ । तर, सबैभन्दा राम्रो हुनेछ कि तपाई आफ्नो खानामा लसुनलाई कुनै न कुनै रुपमा अवश्य प्रयोग गर्नुहोस, अचार वा अरु कुनै रुपमा यसको प्रयोगबाट स्वास्थ्यमा लाभ पुग्ने छ।
रोमानियामा त सदियौदेखि यस्तो विश्वास गरिन्छ कि यदि तपाइएको घरमा कुनै प्रकारको समस्या छ भने घरमा लसुन राख्दा तपाईका सबै समस्या हट्ने गर्दछ।
रोमानियाबासीहरु घरको ढोका र झ्यालमा लसुनको माला बनाएर झुण्ड्याउने गर्दछन् ताकि खराब आत्माहरुबाट बच्न सकियोस । बीबीसी हिन्दीबाट
Previous post: Women employees heading five polling centers in Jhapa
Next post: मनाङ प्रतिनिधिसभामा एमाले, प्रदेशमा काँग्रेस र स्वतन्त्र निर्वाचित